Tani waa magac-bixinta 'Twitch' kaas oo la karinayay muddo sannad ah | Abuurista khadka tooska ah
Twitch ayaa muujisay waxa dib u habeyn lagu sameeyo sumadiisa si loogu dabaaldego sida wanaagsan ee uu ula shaqeynayo bulshadaas firfircoon ee ka dhigtay adeegga ugu dambeeya ee socodka ciyaarta.
Este dib u magac bixinta ayaa la karinayay sanad waana isbeddelkii ugu weynaa ee sumadda tan iyo markii la aasaasay 2011. Dib-u-habeynta waxaa ka mid ah midab cusub oo midab leh, nooca "xayiran", nooc ka wanaagsan oo mascot-ka ah iyo nooc kale oo u muuqda inuu yahay mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa noocyada aad waligaa aragtay.
Lo retro oo leh adeeg qulqulaya Ciyaartu waa cabsi waana taas sababta Twitch uu ugu sharraxay. Waa midab buluug ah oo awood u leh inuu metelo hal-abuurka bulshada iyo tamarta nagu dhiirrigelisay inaan noqonno barxadda ay tahay. Kuwani waa ereyada Twitch ee u gaarka ah.
Inkastoo markan guduudka ayaa xitaa waxyar ka ifaya oo ka firfircoon si loo qabto tamarta ifaysa. Waxaan sidoo kale ka hadli karnaa nooca la beddelay ee font Roobert.
ka qaababka xarafku weli waa "xannibnaan", laakiin waa la hagaajiyay si ay u keenaan muuqaalkaas badan iyo muuqaalka muuqaalka ee 80s iyo 90. Muuqaalka Twitch, oo loo yaqaan Glitch, ayaa sidoo kale helay xoogaa isbeddel ah. Waqtigan xaadirka ah ma naqaano, marka marka ay muuqaalkeeda ka muuqato waxaan u sheegaynaa qaybahaas.
Fiido in wuxuu sii wadaa inuu xukumo muuqaalka dhufto ee socodsiinta ciyaarta taasina waxay soo martay tartan YouTube ah oo ay la socdaan YouTube Gaming, iyo Facebook Gaming, oo aan u muuqan inay muuqdaan; runti, ta hore waxay kudhamaatay joojinta adeegyadeeda dad la aan awgeeda. Hadda inaad sugto astaantaas cusub.
Ha moogaan kuwan talooyin ku saabsan magac bixinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Tani waa magac-bixinta 'Twitch', adeegga qulqulka ciyaarta oo heer sare ah
Soo dejiso Trello oo abaabulo